Kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ezi yayiziifowuni ezazisetyenziswa ngabantu
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ezi yayiziifowuni ezazisetyenziswa ngabantu
Kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ezi yayiziifowuni ezazisetyenziswa ngabantu
Buza ulutsha kwezi ntsuku ukuba zeziphi iifowuni ezisetyenziswe ngabantu kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, kwaye unokufumana iimpendulo zingeyonyani. Ewe kunjalo, kukho & rsquo; Utshintsho olunzulu kubuchwephesha, ukutsiba okukhulu okuye kwagqwesa ngokupheleleyo umhlaba wefowuni.
Kweli nqaku, sibuyela umva kwiminyaka eli-10 ngexesha ukuya ku-2005, iminyaka yobumnyama yeefowuni. Hayi, nkqu nee-smartphones: bekungekho nanye kwezi (ukuza kuthi ga namhlanje inkcazo kunye nesitokhwe esiveliswe ngokupheleleyo kunye ne-ecosystem), endaweni yoko abantu bathetha ngee-PDAs kunye nabanxibelelanisi. I-hilarious ngokwembono yanamhlanje, ayisiyiyo na?
Iifowuni zeClamshell? Unqabile ukubabona namhlanje, kodwa bonke babenomsindo emva ngo-2005. Inguquko kwiminyaka eli-10 eyadlulayo. 4G LTE? Ulibale ngayo, abantu bonwabile ukuba banokunxibelelana kwi-Intanethi kwaphela, kwaye i-EDGE yathathelwa ingqalelo njengeyona intle (i-3G yayiyinto entle).
Ke zaziyintoni iifowuni ezishushu ngo-2005? Masingachithi xesha kwaye sibuyele emva kwimbali.
IMotorola Moto RAZR V3 (Matte emnyama)
I-Moto Razr yathatha umhlaba ngefowuni ngo-2004 xa inguqulelo ye-V3 yayithengisa njengama-hotcake, kwaye ngo-2005, iMotorola yalandela impumelelo ngohlobo olumnyama oluthandekayo lwefowuni. Isikrini esincinci, onke amaqhosha, akukho krelekrele yokwenyani, kodwa mhle kwaye ujongeka umhle.
Funda eyethu Uphononongo lweMoto RAZR V3 apha (izinto zeediliya!)
Umlilo RAZR V3
KwiSony Ericsson K750
I-Sony Ericsson K750 yayingummangaliso omncinci ngo-2005 owabonisa ikamva elihle kwiifowuni zekhamera. Yayiyintoni imincili yonke? Ikhamera ye-2-megapixel! Musa ukuhleka, ibiyiyo yonke ingqumbo, ibangela inqwaba yekhamera yokuthelekisa, iimvavanyo kunye neengcinga nokuba iintsuku zenqaku-kunye-nehlumelo zibaliwe. Sonke siyazi ukuba kwenzeke njani oko, asazi & rsquo;
Funda eyethu Uphengululo lweSony Ericsson K750 apha
Yibize njengonxibelelwano, yibize ngokuba yi-PDA, iNokia N70 yayingutatomkhulu omkhulu we-smartphone yanamhlanje. Inkwenkwe yayinomboniso omkhulu (i-intshi eyi-2.1!), Eqhuba i-UI ephezulu ye-60 UI kwi-chip ye-220MHz TI OMAP 1710 yenkqubo. Musa ukubuza ukuba zingaphi ii-cores ezazikuyo.
U-2005 wayephakathi kwiminyaka yegolide yeBlackBerry. Wonke umntu wayekwiCrackberry, kwaye ngaphandle kolu luhlu lincinci lwama-7100 luyazibuza ukuba lunemibala engama-65K kuphela (ngaphantsi kwama-256K ezinye iiflegi zexesha lezemidlalo), iBlackBerry OS yayo ephambili ngenkxaso ye-imeyile yayiyeyona nto ibethwayo.
Funda eyethu Uphengululo lweBlackBerry 7100 apha
Inxalenye yensimbi engenasinxibo yobuhle etsala ukukhuthazeka kwifowuni yesilayidi eyimpumelelo kakhulu yeentsuku ezidlulileyo zika-2005, iNokia 8800 ifaka i-1.7 & rdquo; umboniso kunye nekhamera ye-SVGA. Umbala wayo ubonakalisa nemibala ye-256K yemidlalo, ininzi yexesha, kodwa ukukhala kude kube namhlanje & rsquo; s 16 yezigidi ezisemgangathweni kwiifowuni.
Funda eyethu Uphengululo lweNokia 8800 apha
IMotorola yayikwadlala kumdlalo wonxibelelwano / ii-PDAs, kwaye i-Q8 yayiyeyona modeli yayo iphambili yexesha ngeqhosha lokuhamba ngeendlela ezi-5 kunye nebhodi yezitshixo epheleleyo yeQWERTY ababengenakuphila ngayo abasebenzisi beshishini. Inkwenkwezi yomboniso, nangona kunjalo, yayiyi-Windows Mobile engu-6.0 ephambili.
Okokugqibela, iNokia 1100 isenokungabi yenye yeefowuni eziphambili ngelo xesha, kodwa xa abantu babenikwa ilungelo lokuba neselfowuni, i-1100 yayiyintsikelelo. Kananjalo, yayiyeyona fowuni ithengisa kakhulu kulo nyaka ngentengiso yeeyunithi ezingama-150 ezigidi, ngaphezulu kwayo yonke enye into emangalisayo ngo-2005.
Ungazibamba njani iibugs ngexesha lokwakha ngokuzenzekelayo
Android chrome isicatshulwa kwintetho
Indawo yokuhlala ikwindawo entsha, imixholo yegumbi, iiholide zeholide kuhlaziyo lwamva nje
Ngaba i-64GB yanele i-iPhone 12 okanye i-12 mini? Ngaba kufanelekile ukufumana imodeli eyi-128 okanye 256GB endaweni yoko?
Beats Studio Buds vs AirPods Pro vs Apple AirPods amaxabiso, amanqaku, kunye nobomi bebhetri
I-iPhone 4S vs iPhone 4: uthelekiso lwekhamera